မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဖွဈလာမယျ့ အခှငျ့အရေးကို ယာဂနျကလော့ ဘာ့ကွောငျ့ ပယျခခြဲ့တာလဲ? – ဖောငျလာ - SPORTS MYANMAR
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဖွဈလာမယျ့ အခှငျ့အရေးကို ယာဂနျကလော့ ဘာ့ကွောငျ့ ပယျခခြဲ့တာလဲ? – ဖောငျလာ
ယာဂနျကလော့ ဟာ လီဗာပူးကို ပွောငျးမလာမီ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ အသငျးရဲ့ မနျနဂြော ဖွဈလာမယျ့ အခှငျ့အရေး ကို ပယျခြ ခဲ့တယျလို့ သိရပွီး အကွောငျးရငျး ကတော့ အိုးထရပျဖို့ဒျ ကလပျဟာ စီးပှားရေး ဆိုငျရာ သွဇာ လှမျးမိုးမှု အတှကျပဲ အာရုံစိုကျ နတောကွောငျ့လို့ သိရပါတယျ။ ယာဂနျကလော့ ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈက ဘိုရပျရှားဒေါ့မှနျ အသငျးကနေ ထှကျခှာ လာခဲ့ပွီးနောကျ လီဗာပူး မနျနဂြော ဖွဈမလာမီ ကလပျ ၂ ခုကို ပယျခခြဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျ နဲ့ ရီးရဲယျမကျဒရဈတို့ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ကလော့ဟာ နောကျဆုံး မှာတော့ လီဗာပူး မနျနဂြော ဖွဈလာခဲ့ပွီး မာဆေးဆိုကျ ကလပျကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ ၂ကွိမျဆကျ ပို့ဆောငျ ပေးခဲ့သလို ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလညျး လီဗာပူး ကို ၆ ကွိမျမွောကျ ဥရောပ ဖလား ရယူ ​ပေးခဲ့ပါတယျ။ လီဗာပူး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ကလပျ စံခြိနျတငျ ရမှတျ ၉၇ မှတျထိ ရခဲ့ကာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ရဖို့ နီးစပျ ခဲ့ပမေယျ့ မနျစီးတီး ထကျ ၁ မှတျ လြော့နညျးကာ ဒုတိယ နရောသာ ရခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူး ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယာလိဂျမှာ ရှဈပှဲ ကစားထားပွီး ပှဲတိုငျး အနိုငျရရှိ ခဲ့ကာ အနီးကပျဆုံး ပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးကို ၈ မှတျ ဖွတျထား ခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူး တိုကျစဈမှုးဟောငျး ဖောငျလာက “ကြှနျတျော ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျက သူနဲ့ အငျတာဗြူး လုပျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ဒေါ့မှနျ ကနေ ထှကျလာ ခဲ့ပွီးနောကျ ဘဏ်ဍရေး အငျအား အရမျးကို တောငျ့တငျးတဲ့ ကလပျ အသငျး အခြို့ကို ပယျခြ ခဲ့တယျလို့ ကြှနျတျော့ကို ပွောပွခဲ့ပွီး အဲဒီထဲက ကလပျတဈခုဟာ သခြောပေါကျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ နောကျတသငျး ကတော့ ရီးရဲယျမကျဒရဈ ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘာလို့ သူငွငျးခဲ့တာလဲ ဆိုတော့ သူဟာ ဒီကလပျတှေ စီးပှားရေး အတှကျပဲ အပွငျးအထနျ အာရုံစိုကျ နတောကို မုနျးတီးလို့ ဖွဈပါတယျ။
သူဘာ့ကွောငျ့ လီဗာပူးကို ကွိုကျနှဈသကျသလဲ ဆိုတော့ ကလပျနဲ့ ပရိတျသတျရဲ့ စရိုကျလက်ခဏာ ၊ သမိုငျးကွောငျး နဲ့ ကလပျရဲ့ ထိပျတနျး ဘဏ်ဍရေး အငျအားကွားမှာ မြှတတဲ့ ဟနျခကျြ တဈခု ရှိနလေို့ပါ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
ရျောဘီဖောငျလာ ရညျညှနျး ခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူး ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တော့တငျဟမျ နဲ့ ကစားရမယျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖိုငျနယျ မတိုငျမီ တှဆေုံ့ မှုမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကလော့က “ကြှနျတျော အခွား ကလပျ တှနေဲ့ စကား ပွောခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဘောလုံး ကလပျတဈခု နဲ့ သိပျမတူ ကွပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လသေံ တှအေရ marketing တို့ ၊ အသငျးပုံရိပျ တို့ကိုပဲ အဓိက ပွောကွပွီး ဟိုဟာ လကျမှတျ ထိုးဖို့ လိုမယျ ၊ ဒီဟာ လကျမှတျထိုးဖို့ လိုမယျ ဆိုတာတှေ ပါပဲ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတျော တှေးမိ ခဲ့တာက ဒါဟာ ကြှနျတျော ခဈြတဲ့ ကစားပှဲ မဟုတျဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ဒါဟာ ဘောလုံးရဲ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါတှဟော ဦးစားပေး ၁ ၂ ၃ ၄ တော့ မဖွဈရပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အနနေဲ့ ကိုယျရဲ့ ကစားပုံကိုပဲ တိုးတကျအောငျ ကြေးဇူးပွုပွီး ကွိုးစားပါ။ ဒါဟာ ကြှနျတျော တကျကြှမျးတဲ့ အပိုငျးပါပဲ။ ကနျြတာ အားလုံး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘောလုံး ကလဲပွီး ကနျြတဲ့ အပိုငျးတှဟော ကြှနျတျော့အတှကျ အရေး မပါပါဘူး။” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာမယ့် အခွင့်အရေးကို ယာဂန်ကလော့ ဘာ့ကြောင့် ပယ်ချခဲ့တာလဲ? – ဖောင်လာ
ယာဂန်ကလော့ ဟာ လီဗာပူးကို ပြောင်းမလာမီ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာမယ့် အခွင့်အရေး ကို ပယ်ချ ခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး အကြောင်းရင်း ကတော့ အိုးထရပ်ဖို့ဒ် ကလပ်ဟာ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ သြဇာ လွှမ်းမိုးမှု အတွက်ပဲ အာရုံစိုက် နေတာကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။ ယာဂန်ကလော့ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က ဘိုရပ်ရှားဒေါ့မွန် အသင်းကနေ ထွက်ခွာ လာခဲ့ပြီးနောက် လီဗာပူး မန်နေဂျာ ဖြစ်မလာမီ ကလပ် ၂ ခုကို ပယ်ချခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက် နဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကလော့ဟာ နောက်ဆုံး မှာတော့ လီဗာပူး မန်နေဂျာ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး မာဆေးဆိုက် ကလပ်ကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ၂ကြိမ်ဆက် ပို့ဆောင် ပေးခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလည်း လီဗာပူး ကို ၆ ကြိမ်မြောက် ဥရောပ ဖလား ရယူ ​ပေးခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက ကလပ် စံချိန်တင် ရမှတ် ၉၇ မှတ်ထိ ရခဲ့ကာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ရဖို့ နီးစပ် ခဲ့ပေမယ့် မန်စီးတီး ထက် ၁ မှတ် လျော့နည်းကာ ဒုတိယ နေရာသာ ရခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယာလိဂ်မှာ ရှစ်ပွဲ ကစားထားပြီး ပွဲတိုင်း အနိုင်ရရှိ ခဲ့ကာ အနီးကပ်ဆုံး ပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးကို ၈ မှတ် ဖြတ်ထား ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဖောင်လာက “ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က သူနဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒေါ့မွန် ကနေ ထွက်လာ ခဲ့ပြီးနောက် ဘဏ္ဍရေး အင်အား အရမ်းကို တောင့်တင်းတဲ့ ကလပ် အသင်း အချို့ကို ပယ်ချ ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက ကလပ်တစ်ခုဟာ သေချာပေါက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တသင်း ကတော့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ သူငြင်းခဲ့တာလဲ ဆိုတော့ သူဟာ ဒီကလပ်တွေ စီးပွားရေး အတွက်ပဲ အပြင်းအထန် အာရုံစိုက် နေတာကို မုန်းတီးလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဘာ့ကြောင့် လီဗာပူးကို ကြိုက်နှစ်သက်သလဲ ဆိုတော့ ကလပ်နဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ ၊ သမိုင်းကြောင်း နဲ့ ကလပ်ရဲ့ ထိပ်တန်း ဘဏ္ဍရေး အင်အားကြားမှာ မျှတတဲ့ ဟန်ချက် တစ်ခု ရှိနေလို့ပါ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ရော်ဘီဖောင်လာ ရည်ညွှန်း ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ကစားရမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် မတိုင်မီ တွေ့ဆုံ မှုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလော့က “ကျွန်တော် အခြား ကလပ် တွေနဲ့ စကား ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘောလုံး ကလပ်တစ်ခု နဲ့ သိပ်မတူ ကြပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လေသံ တွေအရ marketing တို့ ၊ အသင်းပုံရိပ် တို့ကိုပဲ အဓိက ပြောကြပြီး ဟိုဟာ လက်မှတ် ထိုးဖို့ လိုမယ် ၊ ဒီဟာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ လိုမယ် ဆိုတာတွေ ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် တွေးမိ ခဲ့တာက ဒါဟာ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ကစားပွဲ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ဒါဟာ ဘောလုံးရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ ဦးစားပေး ၁ ၂ ၃ ၄ တော့ မဖြစ်ရပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ကစားပုံကိုပဲ တိုးတက်အောင် ကျေးဇူးပြုပြီး ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော် တက်ကျွမ်းတဲ့ အပိုင်းပါပဲ။ ကျန်တာ အားလုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး ကလဲပြီး ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အရေး မပါပါဘူး။” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။